Haweenka Iyo Ragga Oo Isku Khilaafsan Cidda Ay Jecelyihiin Inay Hogaamiso | Somaliland Today
← Dagaal Qadhaadh Oo Ka Soo Cusboonaaday Magaalada Kobane.
Haashka Sigaarka Waxaa Laga Sameeyaa Xaydh Doofaar . →
Haweenka Iyo Ragga Oo Isku Khilaafsan Cidda Ay Jecelyihiin Inay Hogaamiso
(SLT-Texas)-Cilmi-baadhis laga sameeyey haweenka ka shaqeeya qaaradda America, ayaa lagu ogaaday in haweenku aad u neceb yihiin in gabadh madax u noqoto.
Ku dhawaad 40% haweenka ka hawlgala Maraykanka waxay door bidaan in raggu hoggaamiyaan hawlaha ay hayaan sida lagu sheegay xog-ururin ay soo saartay xarunta Gallup.
Waxa kaloo daraasaddani muujisay in 26% ragga ah jecel yihiin in nin madax u nqodo, halka 58% aanay kala jeclayn cidda madaxda u noqonaysa, hadday rag iyo dumar midka ay doonto ahaato.
Xogta cilmi-baadhistan oo laga qaaday 1,032 qof oo dalka Maraykanka ku nool waxa ka soo baxday in shantii qof mid ka mid ah uu aad u jecel yahay in haweenay madax u noqoto haddii ay shaqo qabanayaan.
Inta badan haweenka daraasadan laga qaaday ayaa door biday in ay jecel yihiin in ay madax u noqdaan rag, halka 39% dadka daraasadu door bideen in jinsi aan kiisa ahayn madax u noqdo, waxaanay 34% sheegeen in ay qof kasta ku qanacsan yihin.
Hay’adda Gallup oo xogtan qaaday waxay 60 sanno ee u dambeeyey ku hawlanayd in ay xog-ururintan samayso, iyadoo maxsuulkeeda ugu ballaadhan noqday in haweenku aanay jeclayn in gabadh madax u noqoto.
Xog-ururintii ugu horraysay ee 1953kii hay’adan qaaday waxa la ogaaday in 5% kaliya doorteen in haweenay madax ka noqoto halka ay ka shaqeeyaan, halka 66% door bideen in ay jecel yihiin in rag hoggaanka hawlaha qabtaan, 25% waxay sheegeen in aanay kala jeclayn cida madaxda ka noqonaysa goobaha shaqada.
“Haweenku waxay neceb yihiin in gabadh madax ka noqoto goobaha shaqada ee ay ka hawlgalaan, sababtoo ah waxay haweenku kala aaminsan yihiin firkado khaldan,” ayaa lagu xusay warbixinta cilmi-baadhistan oo lagu daabacay mareegta BusinessWeek.com.